तीजलाई कसरी मनाउने के भन्छन् महिला नेतृ र सामाजिक अभियन्ता ? | Press Pati
तीजलाई कसरी मनाउने के भन्छन् महिला नेतृ र सामाजिक अभियन्ता ?
पार्वती पाण्डे २०७८-०५-२४ ०६:४८ मा प्रकाशित
कपिलवस्तु २४ भदौ । आज हरितालिका तीज ,परम्परागत रुपमा महिलाले मनाउने खुशीयालीको क्षण ,स्वतन्त्रताको वाताबरण तर माइत गएर पनि आफ्नै श्रीमानको दिर्घजिवनकालागि बस्दै आएको व्रतको एक अनवरत श्रृंखलाको दिन । महिला अगुवा र सामाजिक अभियन्ताले तीजमा विकृती आएको र सुधार गर्नु पर्ने पक्ष निरन्तर औल्याउदै त्यसका विरुद्ध आवाज बुलन्दित पार्दै आइ रहेका छन् ।
तर तीज गरिव र निमुखा महिला खुशी हुने पर्व ,सबै महिलाहरुले खुशीले मनाउने पर्व अथवा समानताको वाताबरणको पर्व बन्न सकेको छैन । कसरी तीजलाई संघियता र गणतन्त्रको भावना अनुकुल वनाउन सकिएला ? कपिलवस्तुका अग्रज महिलाको अनुभूती केन्द्रित अन्तर्वाता तिज बिशेष कोशेलीका रुपमा पस्कने जमर्काे गरेका छौंं । प्रस्तुत छ बुद्ध दर्पण दैनिकका सम्पादक पार्वती पाण्डेले गर्नु भएको अन्वर्ताको विस्तृृत अंश :
तिजलाई शुद्ध संस्कृतिक पर्वको रुपमा मनाउनु पर्छ :सांसद बिमला घिमिरे
नेपाली महिलाहरुको महानपर्व हरितालिका तिज नजिकिदै छ । यस पर्वलाई भड्किलो भन्दा पनि पर्वलाई संस्कृतिको रुपमा मनाउनु आवश्यक छ । तिजका नाममा ठुला ठुला चारतारे होटेलमा क्यासेट लगाएर गाना बजाएर होटलको परिकार खाएर तिज मनाउनु भन्दा गाउँ ठाउँमा दिदी वहिनी जम्मा भएर दुःख , पिडा , सुखका गितहरु गाएर गाउँघरकै पोसिला खानाहरु खाएर मनाउनु पर्छ । यसरी मनाउँदा गरीव , पछाडि परेको समुदाय , वृद्धवृद्धाहरु सबैको सहभागीता हुन्छ , पर्वको संरक्षण हुन्छ । गरीव अनि धनी संगै बसेर तिज मनाउँदाको खुशी फरक हुन्छ । त्यसैले नेपाली महिलाहरुको पर्व हरितालिका तिजलाई संस्कृतिको जर्गेना गर्ने गरि मनाउनु पर्छ ।
शिर देखि पाउ सम्म गरगहना किन्ने बानीको अन्त्य हुनु पर्छ । जसले गर्दा महिलाको असुरक्षा पनि हुन्छ । त्यस्तै गरि हदै महंगा साडिहरु वर्षै पिच्छे किन्ने परिपाटिको अन्त्य गर्दा समाजमा सुशासन हुन्छ । हाम्रो समाजमा गरीव र धनी सवै समुदायका मानिसहरु छन , त्यसैले महिलाहरुले गरगहना भन्दा पनि आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्ने , सामाजिक रुपान्तरणमा लाग्ने गर्नु पर्छ । जिल्लाका सम्पुर्ण महिला दिदी वहिनीहरुले पर्वलाई भड्किलो नबनाई सरल कम खर्चिलोमा मनाउन अनुरोध गर्दै तिजको सबैमा शुभकामना दिन चाहान्छु ।
कलाकारका गितले पर्वको मौलिकता झल्काउनु पर्छ : इन्दिरा पन्त अधिकारकर्मी